Delestazy teto Antananarivo Vokatry ny asa fanamboarana natao teny Anosizato
Saika nahitana trangana delestazy avokoa tamina faritra maro teto an-drenivohitra sy ny manodidina afak'omaly alahady.
Nanomboka maraina mandrapaharivan’ny andro mihitsy izany ho an’ny faritra sasany raha naharitra ora 3 hatramin’ny 4 kosa ny an’ny sasany. Nitondra fanazavana mifandraika amin’izany ny orinasa JIRAMA omaly ka fantatra fa noho ny asa fanarenana ilay andrin’ny zotra mitondra herinaratra 63KV mampitohy ny « sous station » Anosizato sy ny « Poste d’Interconnexion » Ambohimanambola no antony nahatonga izany. Nisy tsy fahatomombanana mantsy io andrin’ny zotra mitondra herinaratra io ka tsy maintsy nandraisana fepetra hirosohana ny loza mety hitranga. Ireo toerana vatsian’ireo « sous station » sy « poste d’interconnexion » araka izany no tena lasibatra toy ny teny Itaosy… Na izany aza anefa efa tapitra niverina tamin’ny laoniny avokoa ny famatsiana herinaratra hatramin’ny omaly maraina.